शोकेससहितको भान्सा: तपाईंको क्रोकरी नजरमा | बेजिया
मारिया vazquez | 20/06/2022 20:00 | ट्रिक्स सजावट
के तपाइँ छिट्टै तपाइँको भान्सा सुधार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? क्याबिनेट संग भान्सा हामीले प्रस्ताव गरेकोले तपाईंलाई प्रेरणा दिनेछ! डिस्प्ले क्याबिनेटहरूले भान्साकोठामा सुन्दरता थप्छन् र क्रोकरी र अन्य राम्रा टुक्राहरू प्रदर्शन गर्नका लागि उत्कृष्ट छन् जुन तपाईं सबैले हेर्न चाहनुहुन्छ।
तर त्यो भान्साको डिजाइनमा क्याबिनेटहरू समावेश गर्ने मात्र फाइदा होइन। यी बनाउँछन् भान्सा हल्का देखिन्छ, एउटा विशेषता जुन हामीले सानो वा गाढा भान्सालाई अझ आकर्षक बनाउनको लागि फाइदा लिन सक्छौं। के तपाइँ शोकेसको साथ भान्साकोठामा सट्टेबाजी गर्ने विचार मन पराउन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ?
हामीले उल्लेख गरेका छौं कि क्याबिनेटहरूले भान्साको व्यक्तित्व थप्छन्। लालित्य पनि। र त्यो, थप रूपमा, जब हामी यीसँग बन्द र अपारदर्शी भण्डारण समाधानहरू प्रतिस्थापन गर्छौं, हामी दृश्य रूपमा हल्का ठाउँ प्राप्त गर्छौं। यो साँचो हो कि ताकि तिनीहरूको समावेश अनुत्पादक नहोस्, तिनीहरूलाई व्यवस्थित राख्नुपर्छ, तर यो हामीलाई धेरै सानो देखिन्छ तर तुलनामा सबै फाइदाहरू क्याबिनेटसहितको भान्साकोठा।
यदि तपाइँ पहिले नै तपाइँको भान्सा परियोजनामा ​​केहि अन्य शोकेस थप्न विश्वस्त हुनुहुन्छ भने, तपाइँले यसलाई कसरी गर्ने भनेर निर्णय गर्नु पर्छ। र यो हो कि तपाईंले डिजाइनमा धेरै तरिकामा शोकेसहरू समावेश गर्न सक्नुहुन्छ र हामी पहिले नै अनुमान गर्छौं कि कुनै पनि अर्को भन्दा राम्रो छैन।
1 शोकेसको साथ माथिल्लो क्याबिनेटहरू
2 ठाडो शोकेसहरू
3 अन्य विकल्पहरू
शोकेसको साथ माथिल्लो क्याबिनेटहरू
यो सायद सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्प हो: ठाउँ र प्रकाश प्राप्त गर्न गिलासका साथ केही माथिल्लो क्याबिनेटका ढोकाहरू बदल्नुहोस्। यस तरिकाले भान्सा हल्का देखिनेछ र तपाईंले भण्डारण गर्ने वस्तुहरू धुलो वा ग्रीसबाट सुरक्षित हुनेछन्।
एक साधारण विचार जसको साथ तपाईं अधिक आकर्षक र व्यक्तिगत डिजाइनहरू प्राप्त गर्न खेल्न सक्नुहुन्छ। कसरी? प्रयोग गरेर ए प्रदर्शनका लागि विभिन्न सामग्री जसले तिनीहरूलाई बाँकी क्याबिनेटहरूबाट अलग बनाउँछ र तिनीहरूको सामग्रीमा ध्यान आकर्षित गर्न तिनीहरूको भित्री भागलाई उज्यालो बनाउँछ।
तपाईं सायद सोचिरहनुभएको छ कि हामीले ठाडो शोकेसहरू भनेको के हो। ठिक छ, तिनीहरू अरू कोही होइनन् जसले सम्पूर्ण ओगटेका छन् भुइँ देखि छत मोड्युल। तिनीहरू त्यो क्षेत्रमा उत्कृष्ट छन् जहाँ क्याबिनेटहरू पर्खालको सौन्दर्यशास्त्रसँग तोड्न र यसलाई हल्का गर्न एकअर्कालाई पछ्याउँछन्।
सबै शोकेसहरू मोड्युलर र फर्निचरमा एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने छैन; तपाईं यसलाई भान्सामा पनि समावेश गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीस्ट्यान्डिंग फर्नीचर माथिको छविमा दायाँ देखाइएको जस्तै। यदि तपाइँ तिनीहरूलाई भान्साको टेबलको नजिक राख्नुहुन्छ भने तिनीहरू टेबल सेट गर्दा धेरै व्यावहारिक हुनेछन्।
कति ठूलो राम्रो छ? तपाईंले के देखाउन चाहनुहुन्छ भन्ने बारे सोच्नुहोस् र ती वस्तुहरूलाई समायोजन गर्न सक्ने शोकेसमा आफूलाई सीमित गर्नुहोस्। हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं आदेश कुञ्जी हो ताकि यी शोकेसहरू चम्किन्छन् र यो जति ठूलो हुन्छ, त्यसलाई कायम राख्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ। अव्यवस्थित र अव्यवस्थित प्रदर्शनले भान्साकोठामा कस्तो अराजकताको प्रभाव पार्छ, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्न।
पहिले नै उल्लेख गरिएका विकल्पहरू सबैभन्दा सामान्य छन् तर त्यहाँ धेरै छन्! र यो हो कि शोकेस गर्न सक्छन् फर्निचरको कुनै पनि टुक्रामा समावेश गर्नुहोस्। र फर्निचरको कुरा गर्दा, हाम्रा केही मनपर्नेहरू ती हुन् जसले तल्लो क्षेत्रमा अपारदर्शी ढोकाहरू र माथिल्लो दुई तिहाइमा काँचका ढोकाहरू जोड्छन्। तिनीहरू फर्निचरका टुक्राहरू हुन् जुन विशेष गरी ठूला ठाउँहरूमा चम्किन्छ जहाँ भोजन कक्षले भान्साकोठासँग कोठा साझा गर्दछ। के तिमि तिनीहरुलाई मन पराउछौ?
यस प्रकारको शोकेसमा केही व्यञ्जनहरू भण्डारण गर्नको लागि धेरै गहिराइ, आवश्यक पर्दैन। र आवश्यक छ थप भण्डारण ठाउँ तपाईं सधैं गहिराई बढाउन सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तल्लो क्याबिनेटहरूको। तस्बिरहरूमा तपाईंले सबै प्रकारका उदाहरणहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन हामी तपाईंलाई मन पराउने पक्का छौं।
के तपाईलाई शोकेस भएको भान्सा मन पर्छ? याद गर्नुहोस् कि यदि तपाइँ शोकेसमा ध्यान आकर्षित गर्न चाहानुहुन्छ भने, बाँकी फर्नीचरको सन्दर्भमा रङ कन्ट्रास्टले यसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। यदि, अर्कोतर्फ, तपाईं क्याबिनेट यसमा एकीकृत गर्न चाहनुहुन्छ भने, आदर्श भनेको समान फिनिश र रंगहरूको सम्मान गर्नु हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » ट्रिक्स सजावट » शोकेससहितको भान्सा: तपाईंको क्रोकरी दृश्यमा